PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER 3.3.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 5M - 25M
ဗားရွင္း 3.3.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER
PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
* က Wi-Fi ကိုအောက်မှာဒေါင်းလုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုသည်။
■ဂိမ်းအနိုင်ရဆုကိုစမ်းသပ်ပါနှင့်မိုဘိုင်းအပေါ် console ကနေစိတ်လှုပ်ရှားကိုက်ညီ!
PES 2019 ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် console ကိုပွဲစဉ်အင်ဂျင်ဘောလုံး၏တန်ခိုးနောက်ဆုံးတော့သင်သည်သင်၏လက်ဖဝါးထဲမှာကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုကြောင်းအဓိပ်ပာယျ, မိုဘိုင်းပစ္စည်းများမှချောမွေ့စွာ ported ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 8,000+ ကစားသမား animations တွေကို မှစ. အသင်းဝိသေသ playstyles, သင်၏ပြိုင်ဘက်အပေါ်ယူပြီးတည်းဟူသောစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ - အရာအားလုံးတူညီပါ!
သင်တို့သည်လည်း, ထိုကစားသမားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအရင်ကထက်ပိုပြီးကွဲပြားနေကြသည်အသစ်သောကျွမ်းကျင်မှု, playstyles နှင့်ရည်မှန်းချက်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပများ၏ထို့အပြင်ကျေးဇူးတင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, Unreal ENGINE4အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုသင်အမြင်အာရုံသစ္စာနှင့်ချောမွေ့ကစားသမား animations တွေကိုတစ်ခုမကြုံစဖူးအဆင့်သို့နှင့်အတူလှပသောဂိမ်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမှော်ယခုအချိန်တွင်နေထိုင်ပြီးရှူရှိုက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
■မိတ်ဆွေများနှင့် PES 2019 နှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်!
PES 2019 နှင့်အတူနည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးအတွက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မိတ်ဆွေများနှင့်အသုံးပြုသူများကိုဆန့်ကျင် Play!
တစ်ဦးပြင်းထန်သော 1v1 အတွေ့အကြုံ "ပြည်တွင်းပွဲစဉ်" mode မှာမိတ်ဆွေတစ်ဦးဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်ရန်မျက်နှာကထွက်တိုက်ဖျက်သို့မဟုတ် "ပြည်တွင်းလိဂ်" mode ကိုနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြိုင်ပွဲကိုဖန်တီးရန်မိတ်ဆွေအုပ်စုတစုကိုစုသိမ်း။
"မိတ်ဆွေပွဲစဉ်" mode ကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူသင်၏အဆွေခင်ပွန်းစာရင်းတွင်မဆိုအသုံးပြုသူနဲ့ပွဲစဉ်သို့ခုန်ရန်ခွင့်ပြုသည်အတိုင်း, အကွာအဝေးအစဉ်အဆက်ကိုထပ်ကောင်းတစ်ဦးဖော်ရွေပြိုင်ဆိုင်မှု၏လမ်းရဖို့ပါစေဘယ်တော့မှမ။
သငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျယူဖို့အဆင်သင့်ခံစားရပြီးတာနဲ့သင် "အွန်လိုင်းပွဲစဉ်" mode ကိုအတူအားလုံးအသုံးပြုသူများကိုစိန်ခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်အသင်းများကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးကြီးစိုးများအတွက်တုခွင့်ဆုလာဘ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုအနိုင်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအပတ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအဘို့ပြင်ဆင်သင့်ရဲ့အဖွဲ့ကိုရယူပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအသစ် 12 အဖွဲ့ချုပ်တရားဝင်လိုင်စင်အတွက်ဂိမ်းအကောင်အထည်ဖော်ပြီ။
ဥရောပကနေရုရှားလိဂ်ဘယ်လ်ဂျီယံ, စကော့တလန်, ဒိန်းမတ်, ဆွီဒင်, ပေါ်တူဂီနှင့်တူရကီအနေဖြင့်တစ်ဦး PES-သီးသန့်အဖြစ်လိခ်အဖြစ်က၎င်း၏ပွဲဦးထွက်စေသည်။ နယူးအမေရိကန်တောင်ပိုင်းလိခ်လည်းအာဂျင်တီးနားနှင့်ချီလီလိခ်ကဆက်ပြောသည်အတူအကောင်အထည်ဖော်ပြီ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဂျပန်ကနေအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော J.LEAGUE ထိုင်းနှင့်အာရှတရုတ်လိခ်နှင့်အတူထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ခမ်း, Zico, Romario နှင့် Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini နှင့် Kahn နဲ့တူကမ္ဘာကျော်ဒဏ္ဍာရီများကဲ့သို့သီးသန့်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများကစားသမား PES 2019 ခုနှစ်ပေါ်လာဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
နယူး Legends လည်း, သင်အကောင်းဆုံးကစားသမားနှင့်အတူဆော့ကစားရန်ခွင့်ပြု, ရာသီတစ်လျှောက်လုံးအတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ကဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်!
PES 2019 မှလာမယ့်■လီမိတက်-ထုတ်ဝေ "အသားပေးကစားသမား"
ယခင်တနင်္ဂနွေရဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ကြောင်းကစားသမား "အသားပေးကစားသမား" အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
"အသားပေးကစားသမား" အချို့ပင်သစ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုလက်ခံရရှိနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပွဲစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံပြီး stats တိုးမြှင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်အားကစားရဲ့အများဆုံးအထင်ကရအသင်းများအနေဖြင့်ကစားသမားများအထူးဗားရှင်း FC အသင်းဘာစီလိုနာနှင့်လီဗာပူးလ်အသင်းနှင့်တူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကလပ်အပါအဝင်ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမရရှိနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
■နယူးတိုက်ရိုက် Update လုပ်ပေးတဲ့ Feature ကို
PES 2019 ကအမြဲအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူသစ်ကိုတိုက်ရိုက် Update ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုကျေးဇူးတင် aligned ပါလိမ့်မည်။ စစ်မှန်သောဘဝပွဲကနေနောက်ဆုံးပေါ်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကစားသမားစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အင်ဖိုအပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ In-ဂိမ်းရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးခြေလှမ်းရှေ့ဆက်ယှဉ်ပြိုင်၏နေကြောင်းသေချာစေရန်ဘောလုံး၏အစာရှောင်ခြင်းရွေ့လျားကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ up to date ဖြစ်နေအောင်ထားပါ!
ဒီ app ကိုအွန်လိုင်းမှဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တည်ငြိမ်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူဂိမ်းကိုခံစားပေးပါ။
သင်ကစားပွဲလျှောက်လွှာ၏ဘာသာစကားကို setting တွင်ဂျပန်ကို select ပါလျှင်, "အနိုင်ရရှိမှုက Eleven 2019 ခုနှစ်" ကိုပြသပါလိမ့်မည်။ သငျသညျဂျပန်ထက်အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို select လုပ်ပါလျှင်, "PES2019 PRO Evolution ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ" ပြသပါလိမ့်မည်။
PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 14
app အတု 5
vr0 စတိုး 390 210.42k
PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.3.1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.konami.com/games/privacy/
App Name: PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER
Release date: 2019-09-03 19:45:02
လက်မှတ် SHA1: 5A:13:96:5F:F8:4E:E9:E5:9D:F0:81:67:12:72:AB:0D:43:0E:38:5F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): "Konami Digital Entertainment Co.
အဖွဲ့အစည်း (O): "Konami Digital Entertainment Co.
နယ်မြေ (L): Minato-ku
နိုင်ငံ (C): JP
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Tokyo
PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ